Yonke imihla kuzalwa umntwana owanyayo. Sukuba ngomnye wabo | Iindaba zeGajethi
Ungaqapheli: umntu ongalumkanga kwaye enze ngokungakhathali.
ÚMva nje siyayibona indlela yokuvula iiakhawunti ezahlukeneyo ze-imeyile ezinje nge Hotmail o inbox. Sibonile ukuba siyisebenzisa kanjani umthunywa kwaye kungekudala siza kubona indlela yokusebenzisa ezinye iinkqubo zokuthumela imiyalezo kwangoko. Ukuba uwafundile nawaphi na ala manqaku uya kuyazi ukuba kuwo Ndihlala ndiphawula ukuba kufuneka uqaphele idatha yakho yobuqu, ukungavumeli ukuba amagama agqithisiweyo agcinwe kwiikhompyuter zoluntu, kunye nezinye iingcebiso zokhuselo. Namhlanje ndifuna ukucebisa a Vavanya ukulinganisa inqanaba lakho lokuvezwa kwenkohliso.
Umbuzo wokuqala -
Imagina ongena kwiphepha lokudibana kwaye ubone ifoto yale ntombazana. Yeyiphi kwezi nkcazo zilandelayo ocinga ukuba ichanekile?
a) Igama lam ndingu Dulce, Ndineminyaka engama-23 ubudala kwaye ndivela eValencia (eSpain) kwaye ndilapha ukuza kudlalisa amakhwenkwe namantombazana.
b) Igama lam ndingu USarahNdineminyaka engama-28 ubudala kwaye ndivela ePalma de Mallorca (eSpain) kwaye ndilapha ukuzenzela abahlobo, ukwabelana ngezinto zokuzonwabisa, ukwabelana ngeefoto / iividiyo kunye nokuxoxa.
c) Igama lam ndingu Celeste, Ndineminyaka engama-24 ubudala kwaye ndivela eBadalona (eSpain) kwaye ndilapha ukwenza izihlobo, ukudlala ngothando namantombazana, ukwabelana ngeefoto / iividiyo kunye nokuxoxa.
d) Akukho nanye kwezi ziphezulu.
Khetha enye yeempendulo kwaye uyixhase. Ngoku masidlulele kumbuzo olandelayo.
Imagina ukuba ungena kwiphepha lokunxibelelana kwakhona kodwa ngoku udibana nenye intombazana ekhangeleka kakhulu njengangaphambili kodwa le inelinye igama. Yeyiphi kwezi nkcazo zilandelayo ocinga ukuba ichanekile?
a) Igama lam ndingu Dulce, ..bla bla bla.
b) Igama lam ndingu USarah, ..bla bla bla.
c) Igama lam ndingu Celeste, ..bla bla bla.
d) Amagama am ndinguDulce, uSarah noCeleste.
Akusekho mibuzo ke khetha enye yeempendulo, yiphakamise kwaye ubone ukuba uvavanyo luye njani.
LImpendulo echanekileyo yombuzo wokuqala yimpendulo dKuba intombazana ekwifoto ayibizwanga ngegama likaDulce, okanye uSarah, okanye uCeleste, igama lakhe nguRaven R. kwaye akangomSpanish.
LImpendulo echanekileyo yombuzo wesibini ikwangulo d, kuba igama lentombazana nguDulce, uSarah kunye noCeleste.
- Ithetha ukuthini le nto? -
Nokanye kuya kufuneka umangaliswe ziimpendulo, ngoku uya kubona ukuba konke oku kuthetha ntoni. Into yokuqala ekufuneka uyazi ukuba uphendule ngo-a, b okanye c kuyo nayiphi na imibuzo emibini edlulileyo Uwele emgibeni ukuba umntu ukhathalele.
Lnjengeefoto ezimbini zomntu omnye, Ingqumbo R.Ngubani okwishishini lokuzonwabisa kwabantu abadala kwi-Intanethi (yinto engaphantsi, uyazi). Umntu ulungile, okanye mhlawumbi ulungile, Basebenzise iifoto zale ntombazana ukwenza amaphepha abucala ambalwa kwindawo yokuthandana. Kwiphepha ngalinye kulawa benze ubuntu obahlukileyo obuhambelana namagama amantombazana amathathu kunye neenkcazo esele sizibonile. Ngale ndlela kwaye bazenza abo bangabo, bafumana iidilesi ze-imeyile zazo zonke iifayile ze- ungalumkanga abalumayo banike ii-imeyile zabo ukuba banxibelelane namantombazana angekhoyo. Iziphumo zalo mgibe zezi zilandelayo:
UDulce ufumene izimvo eziyi-1398 kule nyanga kwaye ubuncinci banabalandeli ababhengeziweyo.
USarah utyelele ama-4110 kule nyanga kwaye kukho abangama-32 abayithathileyo kwaye bafuna ukudibana nayo.
UCeleste akabonakalisi inani lotyelelo, kuyabonakala ukuba uneentloni, kodwa unabafana abali-15 abalinde ukuba nolwalamano naye.
Tiindlebe idatha esetyenziswe kwinqaku iyinyani kwaye zithathwa kwiphepha lokunxibelelana nezigidi zabasebenzisi.
YUyabona ukuba kulula kangakanani ukufumana idilesi ye-imeyile ngaphandle. Anditsho ukuba awuyi kumakhasi oqhakamshelwano kwaye unxibelelana nabanye abantu, into endifuna ukuyilumkisa yile Kuya kufuneka ulumke kwaye ucinge ukuba ngubani onika i-imeyile yakho. Le yenye yeendlela ezisetyenziswa ngaba bantu ukufumana i-imeyile yakho, kukho ezinye ezinje ngokushiya idilesi kwiforum kwaye ucele uncedo okanye abo bathi banika incwadi yesikhokelo okanye efanayo nakubani na oyifunayo kwi-imeyile yakhe. idilesi.
EInjongo ephambili kukufumana i-imeyile yakho ukukhukula ibhokisi lakho lokungenayo SPAM okanye mhlawumbi enye into embi. Kwelinye inqaku ndiza kubhala malunga neengozi ze-Intanethi kunye nendlela yokuziphepha. Okwangoku hlala uqaphele kwaye ukhumbule:
Yonke imihla kuzalwa umntwana owanyayo. Musa ukuba ngomnye wabo.
HKude kube yiviniga izitya ezilandelayo, iviniga molo kwaye uhlale ubukele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yonke imihla kuzalwa umntwana owanyayo. Musa ukuba ngomnye wabo
Akunyanzelekanga ukuba babeke lonto kuba umntu ufuna ulwazi hayi loo nto